I-China 4oz 120ml i-Amber Glass yeBoston Ibhotile kunye nomzi mveliso weSprayer kunye nabaxhasi | IHoyer
Ukusetyenziswa kwezinto ezininzi: le setha yokutshiza inkungu ilungile kukhetho oluhle lasekhaya, olubalulekileyo okanye ioli levumba elimnandi, ilaphu lobuso, ifreshener yomoya, iinwele kunye neminye imixube.
Umthamo: I-120ml / 4 oz
Ubunzima: I-108g / 0.23 iphawundi
Ukuphakama: I-112mm / 4.4 intshi
Ububanzi: I-49mm / 1,9 intshi
Iglasi ye-amber eqinileyo kunye ne-sprayer, gcwalisa kwakhona, i-ultraviolet, uhlobo lwesikere.
Ungayisebenzisa ngokukhululekileyo le bhotile ye-amber eyi-4oz nakweyiphi na imeko, iphilile kwaye ikhuselekile. Zonke izixhobo zeBPA MAHHALA kwaye MAHHALA, akukho khemikhali zinobungozi ziqulathwe kuzo. Isitshizi esingumgubo esifanelekileyo esinetyhubhu sisigaba sokutya, siyixhobise ngeplastikhi, unokukroba xa ungasebenzisi, onokuthintela inkungu ukuba yothulwe.
Ibhotile ye-amber ikwanalo olunye uncedo yi-ultraviolet, bayakwazi ukukhusela ulwelo ekutshisweni lilanga. Awudingi kukhathazeka malunga nexesha lokugcina ngakumbi, banokulonyusa kakhulu ixesha lolondolozo.
Ukuphinda uzame: Emva kokuba iilwelo zisetyenzisiwe ngaphandle, unokugcwalisa ngotywala obukhethileyo. Kodwa kwivumba elimdaka okanye ioyile eyimfuneko, kungcono ukucoca inkungu ngaphambi kokuba uzifake kwibhotile kuba isitshizi singavalwa emva kwexesha elide sisetyenzisiwe.
Ubungakanani Umthamo: 120 ml Ubunzima: 108 g Umphakamo: I-112 mm ububanzi: 49 mm Umthamo: Ubunzima be-4oz: i-0.23 yeepawundi Ukuphakama: 4,4 intshi ububanzi: 1.9 intshi
Edlulileyo: Umgangatho wokuqala we-30ml 1oz Amber yeglasi yeoyile ebaluleke kakhulu ngeDropper
Okulandelayo: I-16oz 500ml i-Amber Glass yeBoston ibhotile enepampu emnyama
ibhotile yesirinji engenanto
izitya zeglasi zeoyile
I-16 oz 500ml ye-Cobalt Iglasi yeBlue Boston Bottle ...